Home Wararka Maanta Dhagarta Hay’ada NISA ee la faafiyey oo Kiiskii Ikraan Tahliil dib usoo...
Dhagarta Hay’ada NISA ee la faafiyey oo Kiiskii Ikraan Tahliil dib usoo kicin karta
Cabdullaahi Maxamed Nuur (Cabdullaahi Nasri) oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee Dowlad Gobaleed Jubbaland gaar ahaan Hay’adda Nabad Sugidda NISA ee Jubbaland, oo marti ku ahaa barnaamij ka baxay Hanoolaato ayuu uga waramayay dhibaatooyin ay u geesatay Hay’adda Nabad Sugidda Qaranka NISA, taas oo markii dambe saameen caafimaad ku reebtay.
2019-kii Cabdullaahi Nasri oo ka mid ahaa wefdi la socday Madaxweynaha DG Jubbaland Axmed Modoobe kuwaas oo ku sugnaa Magaalada Nairobi ee Caasimadda Kenya, waxa ay isku arkeyn Cabdiraxmaan Dheere oo ka mid ah BFS asiga oo markaas la socday wefdi uu hormuud u yahay Taliyaha Nabad Sugidda Qaranka NISA xilligaas Fahad Yaasiin Xaaji Daahir.
Is araga Nasri iyo Cabdiraxmaan Dheere ayaa ku bilaabmay sidan “ Ma Jubbaland baa weli ka shaqeysa, markaas baan waxa aan ku iri maya weli wax shaqo rasmi ah oo aan hayo ma jirto ee shaqo ma’igaaga heysaa Qaranka, Xildhibaan Jubbaland waad tahay oo dadka aad matasho ayaan ka mid ahay”. Ayuu yiri Nasri asiga oo sheegay in uu sii aaday Cabdiraxmaan Dhheere shirka.
“Shirka oo qaatay saacado kaas oo ahaa shir qarsoon ayaa waxaa dhacday in loo yeero mid ka mid ah gacan yarayaasha Axmed Madoobe, asiga oo loo idmay in uu u yeero Cabdullaahi, filan waaye aye igu noqotay, sidaas ayaan ugu galay Qolka uu shirka ka socday kaas oo ay kuwada jireen Axmed Madoobe, Fahad Yaasiin iyo Cabdiraxmaan Dheere.” Sida uu yiri Nasir
Nasri oo hadalka sii wata ayaa yiri “Qolka ayaan soo galay 3-dooda oo wada taagan, Madaxweynaha ayaan ka bilaabay Salaanta, Cabdiraxmaan ayaa hadalka bilaabay, wuxuu yiri Fahad; Ninkaan Cabdullaahi baa la yiraahdaa oo waxa uu la dhashay Ciise Kambooni, waa Nin heysta shahaadooyin Caalamid ah oo ku saabsan Sirdoonka. Inaad isbarataan baan ugu yeeray, Fahad waxa uu dhahay waan ku faraxsanahay aragtidaada dabadeed waxa uu la hadlay Cabdiraxmaan asiga oo dhahay Ninkaan waad iikeeneysaa oo waa loo baahanyahay” Halkaas waxaa uga bilwoday barashada Fahad Yaasiin oo ahaa Taliyihii NISA.
Waxaa xigay kulan labaad oo ka dhacay isla huteelka ayaga oo ku balamay inay ku wada kulmaan magaalada Kismaayo asiga oo loo balan qaaday in la siin doono shaqo, Qarankana u baahan yahay Nasri.
Kullankoodii seddaxaad waxaa uu ka dhacay magaalada Kismaayo ayaga oo ka wada hadlay Arrimaha ku saabsan doorashooyinka Jubbaland, xilligaas waxaa DG Jubbaland ka socday isku diyaarinta doorashada Baarlamaanka Jubbaland.
“waxa isoo wacay Cabdiraxmaan Dheere maalmo markii la joogay, waxa uu iisheegay in lakala mashquulay oo safar ay galeen, waxa uu ii sheegay in uu isoo wacayo Amiirka oo ula Jeedo Taliyaha (Fahad Yaasiin). 11:00 PM baa waxaa isoo wacay Fahad Yaasiin iina sheegay in uu Muqdisho yimaado loona diyaariyay shaqadii, asiga oo I dhahay adiga isasoo dabar.” Ayuu yiri Cabdullaahi Nasri.
Maalmo ka dib ayuu soo gaaray Cabdullaahi Muqdisho, garoonka waxaa ka soo waday saaraakiil ka tirsan Hay’adda NISA asiga oo la dajiyay Hottel SYL uu markaas dalbaday in la dajiyo.
“Habeenkii waxaan aaday timo jaro, markii timaha la’iijiray waxaa isoo wacay Cabdiraxmaan Dheere waxa uu igu dhahay ku aaway Hottelka ayaan joogaa, si degdeg ah baan ku soo baxay waan u imid, markii aan u imid waxa aan kuwada kullanay gaarigiisa asiga oo markaas iska dajiyay darawlikiisa.”
Wada hadal dheer ka dib Nasri ayaa loo geeyay Fahad Yaasiin ayada oo ka wada hadlay shaqada Cabdullaahi Nasri, isla habeenkii xigay ayaa loo geeyay Fahad asiga oo yiri “ Shaqadaadii waan kuu diyaarinayaa oo waxa ay qaadaneysaa ku dhawaad 2 bil, waxa aan rabaa in aan kuu magacaabo madaxa dowlad gobaleedyada iyo dowladda dhexe, sidaas darted Xafiiskeyga ayaa hoos imaaneysaa, Cabdiraxmaan Dheere ayaa wada shaqeyneysaan, marka waxa aan ku iri Cabdiraxmaan waa Xildhibaan, barnaamijka aad sheegeyso waa Nabad Sugid, markaas buu dhahay wixii aniga I hoos imaanaaya waxaa ii qaabilsan Cabdiraxmaan Dheere, waan dareemi karaa oo waxaa ku soo galay qarash inta aad shaqada sugeyso waxaad u baahantahay biil iyo lacagtii aad ku soo baxday marka waxa ku siinaaya Cabdiraxmaan”
Cabdullaahi oo hadalka sii wata ayaa sheegay in Cabdiraxmaan Dheere uu Taliyaha uga soo qaaday $30,000 taas oo ah lacagtii uu ku laaban lahaay.
Nasri waxa uu ku laabtay Magaalada Kismaayo ayaga oo xiriiro ay la soo sameeyn qaar ka mid ah saraakiisa NISA dadka la soo xiriiray waxaa ka mid ahaa Cabdiraxamaan Dheere, u jeedkooda ayuu ku sheegay in uu carqaladeeyo doorashada ka socota Kismaayo taas oo lagu wado inay ka dhacdo halkaas ayada oo socotay xilligaas qaban qaabadeeda.
Waxa ay u soo direen lacag dhan $200,000 si uu ugu sameysto deegaan iyo ilaalo ugaar ah, balse Nasri ayaa ka dhago adeegay in uu qaato awaamiirta saraakiisa NISA iyo kan Cabdiraxmaan Dheere ee ahaa Carqaladeenta doorashada ka socota Kismaayo “ wey isoo waceyn waxa ay I dhaheen waxa aan kaa rabnaa labo qofood oo aan siino min $50,000 si ay Bambooyin ugu tuuraan Cabdirashiid Xidiga iyo Cabdinaasir Seeraar oo ahaayeen labo musharax kuwaas oo u tagaan Madaxweynimo, balse waan iska diiday”
Nasri ayaa sheegay in uu ka nasan waayay Cabdiraxmaan Dheere asiga oo sheegay in ay awood u leeyihiin qof dambiile aan aheyn in laga dhigo dambiile, dhanka kale waxa uu sheegay in ay tuhun kala galiyeen Asiga & Madaxweynaha DG Jubbaland Madoobe. “Kismaayo ayaan uga cararay, waxaan go’aan saday in aan aado Nairobi, balse markii aan soo raacay diyaaradda ayaa naloola sheegay in aan Muqdisho aadeyso ka dib u sii gudbi doona Nairobi, ayaga oo sheegay in uu amarkaas ka soo baxay Wasiir Omaar.”
“Markii aan gaaray Muqdisho waxa iiyimid labo dharcad oo damcay in ay iwadaan balse waxa aan u sheegay inay la yimaadaan warqad, wey iga tageyn oo waxa ii yimid kuwa wata bastoolado ayaga oo idhahay sidaan adiga ayaa nagu qasbay, markii ay i wadeen baa waxaa dhacday kuwa cadaan ah oo horteeda fadhiyay inay damceen in taleefan ay la soo baxaan, durbadiiba waa laga qaaday weyn ka jabsheyn, waxa ayna iiwadeyn xarunta NISA ee garoonka”
Asiga oo sii hadlaya ayuu sheegay in laga reebay wixii uu watay balse fursad uu helay in uu la hadlo reerkiisa taas oo sababtay markii dambe in loo taxaabo Xabsiga Godka Jilacow kaas uu in muddo ah ku xirnaa, waxa uu sheegay in uu kala kulmay dhibaatooyin aad u daran kaas oo sababtay in uu miir daboolmay, waxaa la’isku dayay in aan la’ogaan halka aan ku xirnaa balse ma noqon ayuu yiri.
Ugu dambeyn Cabdullaahi Nasri waxaa ka soo daayay Xabsiga Wasiirka Omaar oo ahaa Wasiirka Duulista Hawada XFS, markii laga soo daayay xabsiga ayaa la dhigay mid ka mid isbitaalada magaalada muqdisho si loo daaweeyo, markii la furay duulimaadyada Muqdisho & DG Jubbaland ayaa u suura gashay inuu ka baxsado Muqdisho asiga oo gaaray Magaalada Dhoobley oo aheed halka ay daganyihiin reerkiisa.